Ikofu sisihlobo sethu sokudlala, ukufunda kunye nokuphucula ukusebenza | Iindaba zeGajethi
Ikofu sisihlobo sethu sokudlala, ukufunda kunye nokuphucula ukusebenza
Ikho kwiminyhadala nakwiiofisi kwihlabathi liphela. Nangona kunjalo, kuya kusiba yinto eqhelekileyo ukufumana iziselo ezinomxholo ophezulu wecaffeine kwiidesika zabadlali kunye nabafundi. Kwaye ukuba kuphononongo lwakutsha nje, i-Millennials ikhoboka ngakumbi kunaso nasiphi na esinye isizukulwana sekhofi, esona siyobisi sigqalwa njengesiyobisi ehlabathini. Akuzange kubekho ikofu ingako (kunye ne-caffeine eninzi) esele ityiwe, enyanisweni, iinkampani ezinje Starbucks abanempilo entle yezemali. Ngokophando lwakutsha nje, abo bazalwe emva konyaka we-1990 baqala ukusela ikofu yabo yokuqala kwiminyaka eyi-15.
Bloomberg iye yavuma olu lwaziNangona mhlawumbi ukuthandwa kweefomsile zekofu ngokuyinxalenye kusiso sokwanda kwento efana nekofu. Ngokwam, zimbini iikomityi zekofu (ezisikiweyo kunye neswekile ngaphandle kokuchaneka) kwisidlo sam semihla ngemihla. Nangona kunjalo, ikofu ayisiyiyo kuphela into esinika amandla, kuye kwafakazelwa ukuba ikofu sisiyobisi esisebenza ngengqondo esingagunyaziswanga ngumthetho kuphela, kodwa sikwayimpilo yethu.
Ingxaki ilele kwiziselo ezinje IRED bull y Monster Energy, ekuphela kwesizathu sokwenyani sokuba ngumxube weCaffeine ngeedosi eziphezulu, zidityaniswe neswekile, iswekile eninzi. Ezi zinto, zongezwa kwifayile ye- coca Cola abalonakalisa udumo lwezongezo ezinokuphucula imimoya yethu kunye nempilo yethu.
Nangona kunjalo, ikofu ayihambelani nomntu wonke ngokufanayo, mhlawumbi kungenxa yoko le nto kufuneka siqwalasele ezinye izinto ezinje ngeti, i-theine ineziphumo ezifanayo nekofu, kwaye kubathengi abaninzi iyathandeka ngakumbi malunga nencasa. Inqaku eliphambili malunga neti kukuba uninzi lweentlobo zalo zine-diuretics (okanye ezinye iintlobo zeziphumo), ezinokuthi zisenze sizive singakhululekanga.
Nokuba kungayintoni na, ikofu ikho ekutyeni kwethu kwaye uMbutho weSizwe weKofu eMelika ubona kwi Iminyaka eliwaka, abathengi abayithandayo imveliso, ababonisa amanani afanelekileyo ukusukela ngo-2000.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ikofu sisihlobo sethu sokudlala, ukufunda kunye nokuphucula ukusebenza
Isitokhwe esitsha seXiaomi Mi Qaphela 2 siphela kwimizuzwana engama-50
UGoogle Chrome 53 weWindows uthembisa ukuba uza kuba yi-15% ngokukhawuleza